साउदी अरबका सबैभन्दा ठूला हतियार बिक्रेता अदनानकी ‘प्लेजर वाइफ’ को रोचक कहानी
साउदी अरबका सबैभन्दा ठूला हतियार बिक्रेता अदनानकी ‘प्लेजर वाइफ’ को रोचक कहानी
BBC २०७४ आषाढ २७ गते मा प्रकाशित 347 पटक पढिएको
संसारका सबैभन्दा ठूला हतियार बिक्रेता, साउदी अरबका अदनान खशोगीको अंतरंग दुनियाँबारे जिल डोडले बीबीसीको कार्यक्रम ‘आउटलुक’ सँग विशेष कुराकानी गरेकी छिन् ।
हुन त जिल डोड अहिले सफल व्यापारीको रुपमा स्थापित छिन् । अमेरिकी फेशन डिजाइनर जिलको ब्रान्ड रोक्सीले फेशनको दुनियाँमा निकै लोकप्रियता हाँसिल गरेको छ । तर उनको एक अतित पनि छ । उक्त अतितमा उनी अदनान खागोशीकी ११ प्लेजर वाइफमध्येकी एक थिइन् जसलाई खशोगीले विवाह गरेनन् ।
पढ्नुहोस् जिलको पुरा कहानी उनकै शब्दमाः
सन् १९८२ को कुरा होला, त्यतिबेला म २० वर्षकी थिएँ । मोडलिङ गर्न सुरु मात्र गरेकी थिएँ । एक दिन मेरा एजेन्टले पार्टीका लागि मोन्टे कार्लो जानुपर्ने बताए । यसमा मैले स्विकारोक्ति जनाएँ ।
जब म पार्टीमा पुगें तब मेरो नजर एक व्यक्तिमाथि अडियो । उनी मलाई निकै ‘हार्मलेस’ लाग्यो किनभने उनको उमेर मेरो कुनै साथीको बुवाजस्तै थियो । मलाई लाग्यो कि उनीसँग नाच्दा मलाई केही हानी हुँदैन ।
कुराकानी नगरी म उनीसँग नाच्न थालें । डान्स फ्लोरमा हामीले धूम मच्चयौं । मेरा एजेन्टले मलाई भने, ‘थाहा छ, तिमी कोसँग नाचिरहेकी छौं, यी अदनान खशोगी हुन् ।’
मलाई उनी को हुन्, केही थाहा थिएन । फेरि त्यही पार्टीमा ती व्यक्तिले घुँडा टेकेर मलाई भने, ‘आइ लभ यू’ । डान्स फ्लोरमा फुटेका सिसाहरु छरिएका थिए तर उनले त्यसको केही पर्वाह गरेनन् । उनको घुँडाबाट रगत बगिरहेको थियो । मलाई त्यो घटना निकै रोचक लागिरहेको थियो । मलाई लाग्यो कि मानिसहरु पार्टीमा कतिसम्म ‘पागल’ हुने गर्दछन् ।
त्यसपछि मलाई मेरो एजेन्टले अदनानले कफी पिउनका लागि मलाई आफ्नो बोटमा बोलाएको भन्ने जानकारी दिए । मैले उनलाई यतिबेला म बोटमा होइन बेडमा जान चाहन्छु भनें । एजेन्टले त्यो बोट नभई शिपयार्ड भएको बताए । तर म त्यस दिन गइनँ ।
अर्को दिन डिनरका लागि उनी भए ठाउँ जाँदा मलाई त्यो बोट निकै शानदार लाग्यो । त्यसमा कम्तीमा पनि १० बेडरुम थिए । यस्तो अस्पताल थियो जहाँ ओपन हर्ट सर्जरी सम्भव थियो । त्यस दिन उनले मलाई यदि कपडा चेन्ज गर्नु छ भने गर भन्ने अनुमती दिए ।
‘चुम्बन गर्ने कोसिस गरेनन्’
जब म एक कोठामा गएँ तब त्यहाँको वार्डरोबमा कपडाको लाइन थियो, हरेक कपडा मेरो साइजको थियो । मेरा लागि फिट कपडा, म त अचम्ममा परेको थिएँ ।
त्यसपछि हामी घण्टौंसम्म कुराकानी गरिरह्यौं । उनी मसँग सम्बन्धित सबैकुरा सोधिरहेका थिए र सबै कुरा मेरो सुरक्षाको दृष्टिकोणले आवश्यक भएको उनले बताइरहेका थिए । उनले मेरा रुचीबारे सोधिरहेका थिए । मैले उनलाई सबैकुरा बताइरहेको थिएँ ।
यद्यपी, उनलाई मेरा बारे सबैकुरा थाहा थियो – जस्तै म के काम गर्छु, मेरो बुवा के काम गर्नुहुन्छ । त्यसपछि जब म बोटबाट बाहिर निस्कने तयारीमा रहें तब मलाई उनीसँग पुनः एकपटक भेट्ने इच्छा भयो ।
यद्यपी, त्यतिबेला मलाई उनीसँग अब भेट होला नहोला भन्ने थाहा थिएन । त्यसको एक कारण थियो कि ती व्यक्तिले मलाई चुम्बन गर्नसमेत कोसिस गरेनन् । त्यतिबेला मलाई महसुस भयो, यी कस्ता व्यक्ति हुन् ?
त्यसपछि लामो समय लाग्यो । यद्यपी, उनले मलाई पेरिसमा आफ्नो घरमा लञ्चका लागि बोलाए । त्यसपछि उनलाई मलाई छुट्टीमा अफ्रिका र स्पेन बोलाए । मैले उनलाई थुप्रै पटक भेटिसकेकी थिएँ तर मलाई उनको थर थाहा थिएन, उनी के काम गर्छन् त्यो पनि मलाई थाहा थिएन ।
उनको उचाई ५ फिट चार इन्च थियो । म उनीभन्दा पाँच इन्च अग्ली थिएँ । मोडलिङको दुनियाँमा थुप्रै सुन्दर मानिससँग भेट्थें, त्यो हिसाबले उनी आकर्षक थिएनन् । तर म उनीसँग सहज थिएँ ।
एक दिन हामी सबै समूहमा थियौं । मैले उनलाई चुम्बन गर्ने कोसिस गरें, उनले पहल गरेनन् । उनले आफू यस्तो गर्न नसक्ने बताए । यसका लागि एक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताइयो । उनले मलाई प्लेजर वाइफ बन्नका लागि हस्ताक्षर गर्न भने ।
उनले मलाई आफूले तीन कानूनी श्रीमती र ११ प्लेजर वाइफ राख्न सक्ने बताए । तिमी प्लेजर वाइफ बन्न सक्छौ । जब चाहन्छौ त्यतिबेला भेट्न सक्छौ, जहाँ चाहन्छौं त्यहाँ भेट्न सक्छौ । उनले यसो भनेपछि म उनको प्लेजर वाइफ बन्न तयार भएँ ।
त्यसपछि त मेरो जीवन पूर्ण रुपमा परिवर्तन भयो । उनले मलाई फेसनेबल कपडा किनिदिन्थे । म उनीसँग यात्रा गर्न थालें । उनी हतियार बिक्रेता हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउन मलाई धेरै समय लाग्यो ।
मैले होटल रुममा र अन्य स्थानमा उनका अन्य प्लेजर वाइफलाई भेटें । टाढाबाट देख्थें तर बारम्बार भेट्थ्यौं । एकरात उनी मेरो कोठामा आए, नेकलेस उपहार लिएर । म सुतिरहेकी थिएँ । उनले मलाई चुम्बन गरे र म उनी भएतिर फर्किएँ त्यसपछि उनले भने, ‘ओहो, म गलत कोठामा आएँ तर तिमी यो उपहार लिउ ।’ त्यतिबेला मलाई एकदम नराम्रो लाग्यो म टुटेकी थिएँ ।
त्यसपछि एक दिन हाम्रो सम्बन्धमा टर्निङ प्वाइन्ट आयो । एक दिन अदनान र म बेडरुममा थियौं । उनका एक सहयोगीले नोटबुक लिएर आए । त्यसमा युवतीहरुको तस्बिर पानाजस्तै थिए । म अचम्मित भएँ । के मलाई पनि यसरी नै छानेका हौ ? मैले प्रश्न गरें । उनीहरु दुबैजना हाँस्न थाले । मलाई लाग्यो कि मलाई पनि यसरी नै छानिएको थियो ।
म त्यतिबेला २२ वर्षको मात्रै थिएँ तर उनी मभन्दा कम उमेरका युवतीहरुको खोजी गरिरहेका थिए । उनीहरुले मभन्दा कम उमेरकी युवती छानेका थिए । मैले सोचें, के म उनको लागि बुढी भएँ ?
‘आइ लभ्ड अदनान’
त्यसपछि उनको र मेरो सम्बन्ध समाप्त भयो तर हामी फोनमा कुराकानी गरिरहन्थ्यौं । उनले मलाई चाहेको समयमा फिर्ता आउन आग्रह गर्थे । तर उनको थुप्रै महिलासँग सम्बन्धमा रहने बानी मलाई मन पर्दैनथ्यो । तरपनि हामी कुराकानी गरिरहन्थ्यौं ।
पछि मैले एक अमेरिकीसँग विवाह गरें । विवाहित भएको २० वर्षभन्दा बढि भइसक्यो । म ५७ वर्षको भइसकें । तर अदनान खशोगीको त्यस दिन निधन भयो जब मेरो किताब बिमोचन थियो । मलाई ठूलो झट्का लाग्यो ।
म धेरै रोएँ, म उनलाई भन्न चाहन्थें, ‘अदनान, आइ लभ्ड यू’ । यो सबै यसकारण थियो किनभने उनले मलाई कहिले पनि नराम्रोसँग कुरा गरेनन् । हाम्रो सम्बन्ध निकै राम्रो थियो । उनले मेरो निकै सम्मान गर्ने गर्दथे । उनीसँगको मेरो सम्बन्ध जीवनको सबैभन्दा उत्कृष्ट सम्बन्ध थियो ।
२०७४ आषाढ २७ गते मा प्रकाशित